Daawo Gabdhaha dalka ku nool hadii aad Guurdoon ahayd -VIDEO - iftineducation.com
Daawo Gabdhaha dalka ku nool hadii aad Guurdoon ahayd -VIDEO
aadan21 / March 6, 2016
iftineducation.com – Daawo Gabdhaha dalka ku nool hadii aad Guurdoon ahayd -VIDEO
iftin oo xog wareysi la yeelatay gabdho dhowr ah oo ku nool gudaha dalka, iyo sidoo kale wiilal ayaa soo aruurisay arimaha ugu badan ee gabdhahaasi ay tilmaameen in ay ku xushaan ragga ay jecel yihiin in ay shukaansadaan.
– nin hanti leh – nin qurux badan – nin aqoon leh – nin wadaad ah – nin calool yar – nin dibada ka yimid gaar ahaan yurub ama Waqooyiga Ameerika.
-Arinka ugu yaabka badan ayaase ah in gabdhahani ay intooda badan doonayaan in ninku uu yeesho dhamaan astaamaha kor ku xusan, taasoo ka dhigan mustaxiil iyo waxaan inta badan macquul aheyn.
-Arintaan ayaana sababtay in dhalin yaro badan oo gudaha wadanka ku nool ay waayaan gabdho ay shukaansadaan ama u haasaawa tagaan, ayadoo qaarkood dantu ay ku qasabtay in ay iska dhigaan qurba joog dalka dib ugusoo laabatay.
Dhowr Sabab Oo naagaha ku kalifa in ay gogol dhaaf sameeyaan-VIDEO
Nabadoon ka xanaajiyay Gabdhaha Reer Puntland -VIDEO